U-Aquitaine: ophumelele inoveli yembali yePlanethi 2020 ibhaso | Uncwadi lwangoku
I-Aquitaine yincwadi yokugqibela ngumbhali othengisa kakhulu eSpain: uEva García Sáenz de Urturi. Ipapashwe ngo-2020, yimbali yamandulo yeentsomi, umntu ophambili kuye ngu-Eleonor wase-Aquitaine - okwabizwa ngokuba ngu-Eleanor - oza kwenza konke okusemandleni ukufumanisa ukuba yintoni ebangela ukubulawa kukayise, uDuke Guilhèm X wasePeitieus.
Eli yelenqe lijikelezwe zii-enigmas, i-sigils, impindezelo kunye nokulala kunye. Njengokuba bekukho umdlalo weetrone, kuyakubakho iimfazwe ezininzi ezikhoyo kweli bali, eliqulethe ne-trio enothando. Ngale ncwadi umbhali wazimisela kwicandelo loncwadi, inyani eqinisekisileyo ngokufumana ibhaso lePlanethi ngo-2020.
1 Isishwankathelo se-Aquitaine (2020)
1.1 Ukufa okungummangaliso
1.2 Icebo lokuziphindezela
1.3 Ukujika okungalindelekanga
2 Uhlalutyo lwe-Aquitaine (2020)
2.3 Ukulungiselela inoveli
3.1 Izifundo kunye namava omsebenzi
3.3 Iincwadi zikaEva García Sáenz de Urturi
Isishwankathelo I-Aquitaine (2020)
1.137, UGuilhèm X, "UDuke wase-Aquitaine", ukuya eCompostela emva kohambo olude. Ukufika phambi kwesibingelelo esikhulu secawa, ngokungalindelekanga uyawa afe. Ulusu lwakho -Intoni ajike abe luhlaza okwesibhakabhaka- iphawulwe "ngokhozi lwegazi", intuthumbo yakudala esetyenziswa eNormandy. Bonke ababonayo bothukile kukusweleka okungummangaliso kwenkokeli.
Omnye wabantu abachaphazelekayo intombi yakhe: iDuchess Eleanor, i-WHO, nge nje 13 iminyaka, kufuneka uthathe ubukumkani. Yakhe uqinisekisa ukuba utata wakhe wabulawa ngabantu baseCapetians (Izihlobo zika-King Luy VI wase-France), ngenxa yomdla wabo omkhulu kumazwe ase-Aquitaine.
Njengomphumo wayo yonke into eyenzekileyo, indlalifa yetrone yenza isicwangciso esibandayo sokuziphindezela apho iya kufuna ukungena kubukumkani baseFrance kwaye iphumelele ukuthembela kuyo. Ukufezekisa injongo yayo, intombazana leyo iya kunyelisa ukuthanda kukayise. Olu xwebhu luza kubonisa njengentando yesikhulu umtshato phakathi kwentombi yakhe y uKing Kid (Luy VII), unyana ka-King Luy VI wase-France.
Ngaphambi kokuba aqale ubuqhetseba, ii-duchess ziya kuvuma yonke into awayeyicwangcisile kumbingeleli oselula, ogcina isazisi esingalindelekanga.
ULeonor ukhwele de afike kunye inkosi uLuy VI waseFrance, eyaziwa ngokuba yi "Fat King". Oku, ngokukhawuleza, ulungiselela umtshato phakathi kweduchess kunye nonyana wakhe. Ngexesha lesidlo, ngequbuliso, ikumkani uwa efile, phantsi kweemeko ezifanayo noGuilhèm X. Oku kuphelisa isikrokro sikaLeonor, ngoku ekufuneka ekhokele iFrance kunye noLuy omncinci.
Bobabini izakusungula uphando olothusayo malunga nokufa okungaqhelekanga kula madoda abalulekileyo. Yale, baya kujika kwiikati zase-Aquitanian, Los iintlola ezaziwa Iinkokheli. Ookumkani abancinci nabangenamava kuya kufuneka badlule kwiimeko ezininzi. Kolu hambo, inkwenkwe-eyashiywa ehlathini kumashumi eminyaka eyadlulayo-iya kudlala indima ebonakalayo.
I-Aquitaine: Imbasa yePlanethi ...
Uhlalutyo I-Aquitaine (2020)
Yiyo inoveli yembali zongezwa ngeentsomi, setha ubukhulu becala kummandla waseFransi. Kwezabo Amaphepha ayi-416, amanqaku ebali Iinxalenye ezi-4, kuphuhliswe ngokulandelelana Izahluko ezimfutshane ezingama-64. Umsebenzi uneentlobo ezimbini zokubalisa: Ekuqaleni umntu, nguLeonor noLuy; y en umntu wesithathu, ngunondaba owazi yonke into.
Umbhalo weBasque uthathe iminyaka elishumi yobomi buka-Eleanor weAquitaine, umfazi onembali engaqhelekanga- weza kukhokela izikumkani ezintathu ezibalulekileyo zaseYurophu. Eli yelenqe lizalisa imfihlelo yokufa yamanani amabini abalulekileyo exesha ngeenyani eziyinyani. Ukongeza, ungena kweminye imicimbi, eyomntu neyangaphandle, enika iindlela ezahlukeneyo zebali.
U-Eva uzenzele igama elihle ngencwadi zakhe zembali; okokuqala, kumgangatho webali; Okwesibini, kumalungiselelo awenzayo ngaphambi nangexesha lokulungiselela iincwadi zakhe. Ekupheleni kwecebo lika I-Aquitaine, umbhali unikezela amaphepha aliqela Ukuchaza amaxwebhu aneenkcukacha. Kuzo, Ibango lokuba ufunde ngaphezu kweencwadi ezili-100 kunye neenkcukacha zohambo lwakhe lokuya kwindawo eyayisakuba yintsimi yeAquitaine.
Kolu tyelelo watyelela iBordeaux, iPoitiers kunye neAbbey yase Fontevrault, apho uEleonor waseAquitaine asweleke khona wangcwatywa. Pha uphando malunga namasiko kunye ne-gastronomy yelo xesha, awongeze ukunika ibali ngakumbi. Kwakhona wathatha ikhosi yokukhanyisela, apho wafunda khona ngobugcisa obenziwa ngabaemonki ukwenza imibhalo yesandla ephakathi.
USáenz de Urturi wongeze a iqela elikhulu labalinganiswa kwinoveli-yokwenyani, ubukhulu becala. Yima geqe, Ngezizathu ezicacileyo, abalinganiswa bayo abaphambili: ULeonor noLuy; Nangona kunjalo, umbhali akazange abatyeshele abalinganiswa besibini, kodwa wabanika ngesakhiwo esihle kunye neetempile ezichazwe ngokugqibeleleyo. Phakathi kokugqibela ume ngaphandle: URaymond de Poitiers -Umalume we-protagonist-, "Umntwana", uAdamar noGaleran.
I-Aquitaine yinoveli ukuba ha ibangele isiphithiphithi, ukuya kwinqanaba lokuqwalaselwa yinto yoncwadi. Nangona kunjalo, njengawo nawuphi na umsebenzi, unabagxeki bakhe, abathi uninzi lomxholo wembali awukho. Okwangoku, isicatshulwa sinokuvunywa ngama-72% ngabafundi kwiwebhu.
Amanqanaba ayo ama-5.807 eAmazon ayibeka kwi Indawo yokuqala kwintengiso kudidi loNcwadi lwaseFrance. Uninzi lwabasebenzisi bayilinganisela ngesona sisindo siphezulu, ngomndilili we-4,2 / 5. Kufuneka kuqatshelwe i-48% inike umsebenzi iinkwenkwezi ezi-5, kwaye bali-14% kuphela abanike iinkwenkwezi ezi-3 okanye ngaphantsi.
U-Eva García Sáenz de Urturi wazalwa nge-20 ka-Agasti ka-1972 eVitoria, enye yezona ndawo zintle zamaxesha aphakathi kwilizwe laseBasque; intombi yegqwetha kunye notitshala. Wahlala iminyaka eyi-15 kwidolophu yakowabo, ukuze kamva ahambe nentsapho yakhe eAlicante, isixeko ohlala kuso ngoku.
Caphuna nguEva García Sáenz.
Bobabini ebuntwaneni bakhe nasebusheni bakhe, wayebonakaliswa ngokuba ngumfundi onomdla. Ukususela kwiminyaka eli-14 waqalisa ukubhala, oku kubulela kwimpembelelo yokuba ngubani owayengunjingalwazi wakhe kuncwadi kwisikolo saseSan Viator. Emva kwexesha, uthathe izifundo zoncwadi lokuyila kumaziko abalulekileyo eSpanish. Ngeli xesha, wabhala amabali amafutshane awaphumelela nawo kukhuphiswano oluthile.
Ngobungcali, wafunda isidanga kwi-Optics nakwi-Optometry, ngelixa wayesenza lo msebenzi-eneminyaka engama-27-wakwazi ukuqhuba inkampani yezizwe ngezizwe. Emva kweminyaka eli-10 kweli candelo, waqala ukusebenza kwiYunivesithi Alicante. Ukusukela ngo-2009 wabuyela kuncwadi; Ndichithe ubusuku ndiphanda kwaye ndibhala eminye imigca eyayiza kuba yincwadi yakhe yokuqala emva kweminyaka emithathu.
2012, Umbhali waseBasque Ipapashwe nguwe inoveli yakhe yokuqala eqongeni Amazon: Isaga yobomi obude: usapho oludala. Le ngxelo yembali yatsala umdla wabalandeli abangamawaka, abathi kubangele ngalo mzuzu Isiphithiphithi esikhulu soncwadi. Ngo-2014, wagqiba i-biology ngo: Oonyana baka-Adam Wazisa incwadi yakhe yesithathu: Indlela eya eTahiti; emva kokuphumelela kokubini, wagqiba kwelokuba azinikele ngokupheleleyo kuncwadi.
Ngo-2016 wayikhupha IsiXeko sase-White Trilogy, uthotho umbhali ononcwadi afumana ngalo izigidi zabafundi kwaye wamthatha ukuba ngumbhali umthengisi ogqibelele. Emva kweminyaka emine, incwadi yokuqala kuthotho: Ukuthula komzi omhlophe, yahlengahlengiswa kwi-cinema nguDaniel Calparsoro. Emva kwexesha elide lomsebenzi onzima kunye namaxwebhu, thaca inoveli yakhe yamva nje: I-Aquitaine (2020).
Iincwadi zikaEva García Sáenz de Urturi
I-Saga yoBomi obude I: Usapho oludala (2012)
I-Saga ye-II yexesha elide: Oonyana baka-Adam (2014)
I-White City Trilogy I: Ukuthula kweSixeko esiMhlophe (2016)
I-White City Trilogy II: IiRites zaManzi (2017)
I-White City Trilogy III: IiNkosi zeXesha (2018)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » I-Aquitaine